Man United 4-1 Leicester – Red Devils Oo Ku Ciil Baxday Dawacooyinka Iyagoo Ku Xasuuqay Old Trafford Xilli Pogba Uu Furtay Akoonkiisa Goolasha. - Wargane News
Home Sports Man United 4-1 Leicester – Red Devils Oo Ku Ciil Baxday Dawacooyinka...
Man United 4-1 Leicester – Red Devils Oo Ku Ciil Baxday Dawacooyinka Iyagoo Ku Xasuuqay Old Trafford Xilli Pogba Uu Furtay Akoonkiisa Goolasha.
Kooxda Manchester United ayaa ku ciil baxday kooxda heysata horyaalka Premier League oo marti ugu aheyd Old Trafford iyagoo ku qaarjiyay 4-1 iyadoo kooxda Red Devils ay ku soo laabatay wadada guusha ee Premier League, waxaana ay si sahlan ku garaaceen Leciester City iyadoo Paul Pogba uu furtay akoonkiisa goolasha ee Shayaadiinta Cas Cas.
Tababare Jose Mourinho ayaa isbedel ku sameeyay shaxdiisa kulankii maanta isagoo kursiga keydka dhigay kabtankii Wayne Rooney iyadoo uu ciyaarta ku soo bilowday Juan Mata oo ka ciyaarayay booskii Rooney.
20kii daqiiqo ee ugu horeysay ciyaarta waxaa heysatay kubada inteeda badan kooxda martida aheyd ee Leicester City laakiin fursadihii ay heleen kama aysan faa’ideysanin, waxaana waaga uu ku baryay daqiiqadii 22aad markii ay Man United hogaanka u qabatay ciyaarta.
Kubad gees laad ah oo ay heshay Manchester United ayaa waxaa soo qaaday Daley Blind waxaana madaxa la helay daafaca kale Chris Smalling kaasoo ku guuleysay inuu kubada dabamariyo goolhaye Zieler.
XAQIIQ: Lix ka mid ah todobada gool ee uu Chris Smalling ka dhaliyay Premier League ee Manchester United waxa uu ku dhaliyay madax.
Manchester United ayaa hogaanka ciyaarta sii dheereysatay daqiiqadii 37aad waxaana goolka uu ahaa mid si qurux badan looga shaqeeyay. Mata ayaa bilaabay oo quudiyay Pogba, kaasoo isna kubada u dhigay Lingard iyadoo da’ yarka Man United kubada u dhex bixiyay Juan Mata oo isna shabaqa ku hubsaday.
United oo iska heysatay ciyaarta ayaa mashquul ku noqotay goolka Leicester City waxaana ay heleen goolka seddexaad seddex daqiiqo ka dib goolkii labaad ee Juan Mata
Blind ayaa gees laad kubad aheyd uu si degdeg ah u baasay, waxaa kubada helay Juan Mata oo durbadiisa kubada u dhigay Marcus Rashford oo goolka hortaagnaa, 18 jirka Ingariiska ah ayaana shabaqa banaan kubada cusjiyay iyadoo United ay hogaanka 3-0 ku qabatay.
Shan daqiiqo gudahood ayayna Manchester United seddex gool ku dhalisay markii ay heshay goolka afaraad daqiiqadii 42aad, mar kale waxa ay aheyd kubad gees laad ah, waxaa soo qaaday Blind iyadoo madax uu la helay Paul Pogba kaasoo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee kooxda tan iyo markii uu lacag rikoorka adduunka ah ugu yimid.
Qeybtii hore ee ciyaarta oo United ay si weyn u kala dhantaashay Leicester City ayaa waxaa lagu kala nastay hogaan ay u qalmeen oo 4-0 ah.
XAQIIQ: Markii ugu danbeysay ee ay Man United afar gool dhaliyo ka hor waqtiga nashada kulan Premier League ah waxa ay aheyd kulankii 1dii December 2012 ee ay 4-3 kaga badiyeen Reading.
Markii ay saacad socotay ciyaarta ayay kooxda Leicester City gool soo ceshteen iyadoo xiddiga bedelka ku soo galay ee Gray uu kubad gantaak ah ka soo qaaday banaanka kore ee xerada goolka isagoo aan wax fursad siinin goolhaye De Gea, waxaana ay ciyaarta noqotay 4-1 oo ay United hogaanka ku heysay.
Zlatan Ibrahimovic ayaa fursado fiican helay qeybtii labaad laakiin kama uusan faa’ideysanin iyadoo Manchester United ay si wacan u difaacatay guusheeda iyo seddexda dhibcood ee muhimka ah.Man United ayaana ku soo laabatay wadada guusha ee Premier League iyagoo ku ciil baxay kooxda heysata horyaalka Premier League, Man United ayaana haatan soo gashay kaalinta seddexaad iyagoo leh 12 dhibcood laakiin kulan ayay sii hor ciyaareen marka loo eego inta badan kooxaha kale.
Manchester United Vs Lister
War Deg Deg Ah: Guddomiye Cirro Oo Imika Xilal Cusub Magacaabay Iyo Cida U Magacaabay
Deg Deg: Daawo Xasan Xaydh Oo Sheegay Inu Xisbiga Waddani Gabi Ahanba Khilaaf Culusi Dhex Habacsan Yahay,,,
Somaliland: “Haddii Shidaalkaas Lagu Guulaysto Wixii La Sheegay Ayaa Dhab Noqon, Haddii Laga Waayana Beenba Way Noqon”
“Waa Xidigeena Ugu Weyn, Wuuna Ka Wanaagsan Yahay Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo” Romario
Messi iyo Di Maria oo ka qeyb qaatay tababarkoodii ugu horreeyay ee macalinka cusub ee xulka Argentin